नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : रवि लामिछानेलाई चितवन पछी काठमाडौंमा पञ्चेबाजा सहित जनताले यसरी गरे स्वागत । नेताहरु जिल्ल ! रवि लाखौंं जनताको तिमीप्रतिको अगाध माया र विश्वाश कायम राख्नु है !
रवि लामिछानेलाई चितवन पछी काठमाडौंमा पञ्चेबाजा सहित जनताले यसरी गरे स्वागत । नेताहरु जिल्ल ! रवि लाखौंं जनताको तिमीप्रतिको अगाध माया र विश्वाश कायम राख्नु है !
Posted by www.Nepalmother.com at 9:53 AM